ग्यालक्सी भनेको के हो: विशेषताहरू, प्रकारहरू, संरचनाहरू र महत्त्व | नेटवर्क मौसम विज्ञान
एउटा ग्यालेक्सी भनेको के हो?
ब्रह्माण्डमा ताराका हजारौं समूहहरू छन् जुन विभिन्न आकारहरू हुन्छन् र सबै प्रकारका आकाशीय निकायहरू होस्ट गर्दछन्। यो आकाशगंगाको बारेमा छ। जब सोधेको थियो ग्यालेक्सी भनेको के हो?हामी भन्न सक्दछौं कि ती ब्रह्माण्डमा ठूला संरचनाहरू छन् जहाँ ताराहरू, ग्रहहरू, ग्यास बादलहरू, ब्रह्माण्ड धूल, नेबुला र अन्य सामग्रीहरू एक साथ समूहीकृत गरियो वा गुरुत्वाकर्षणको आकर्षणको क्रियाले नजिकै हो।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई एउटा आकाशगंगा के हो भन्दै जाँदैछौं, यसको विशेषताहरू र के प्रकारहरू छन् जुन अवस्थित छन्।
1 एउटा ग्यालेक्सी भनेको के हो?
3 ग्यालक्सीहरूको प्रकार
4 उत्पत्ति र विकास
यो समूह वा ताराहरूको विशाल समूह हो जहाँ सबै प्रकारका आकाशीय पिण्डहरू भेट्टिएका छन्, जस्तै ग्रहहरू, नेबुला, ब्रह्माण्ड धूलो र अन्य सामग्रीहरू। मुख्य सुविधा त्यो आकाशगंगाहरू गुरुत्वाकर्षणको आकर्षण हो जुन यी सबै सामग्रीहरूलाई समाहित गर्दछ। मानव हाम्रो ईतिहास भर मा आकाशगंगाहरु को रात को आकाश मा फैलाउने प्याच को रूप मा हेर्न को लागी सक्षम छ। हामीसँग टेक्नोलोजीको विकासलाई धन्यवाद छ र उनीहरूको बारेमा बढि जानकारी छ।
हाम्रो सौर्यमण्डल जहाँ सूर्य र सबै ग्रहहरू अवस्थित छन् आकाशगंगाको अंश हो जो मिल्की वे भनिन्छ। पुरानो समयमा कसैलाई थाहा थिएन कि यस सेतो पट्टीले आकाश पार गर्यो र यसकारण किन उनीहरूले यसलाई दुधको बाटो भने। वास्तवमा, आकाशगंगा र मिल्की वेको नाम उही मूलबाट आएको हो। ग्रीकहरू विश्वास गर्छन् कि ताराहरू हर्कुलसलाई खुवाउँदा देवी हेराले छर्केका दुधका थोपाहरू थिए।
मा मिल्की वे हामी धेरै ताराहरू र तारा अlar्कको धुलोको गठन फेला पार्न सक्छौं। सबैभन्दा उल्लेखनीय नेबुला र स्टार क्लस्टरहरू हुन्। हुनसक्छ, तिनीहरू अन्य आकाशगंगामा पनि अवस्थित छन्। ग्यालक्सीहरू उनीहरूको आकार र आकार अनुसार वर्गीकृत छन्। तिनीहरु बौने ताराहरु बाट "केवल" दशौं लाखौं ताराहरु को अरबौं सितारा सहित विशाल ताराहरु को लागी। आकारको सर्तमा, तिनीहरू लंबवर्तुकार, घुमाउरो (मिल्की वे जस्ता), लेन्टिकुलर वा अनियमित हुन सक्छन्।
अवलोकन योग्य ब्रह्माण्डमा, कम्तिमा २ ट्रिलियन आकाशगंगाहरू छन्, जस मध्ये धेरै मध्ये १०० र १०,००,००० पार्सेक बीचको व्यास छ। तिनीहरू मध्ये धेरै आकाशगंगा क्लस्टरहरूमा क्लस्टर्ड छन् र यी सुपर क्लस्टरहरूमा छन्।
यो अनुमान गरिएको छ प्रत्येक ग्यालक्सीको द्रव्यमानको% ०% सामान्य वस्तु भन्दा भिन्न छ; अवस्थित छ तर पत्ता लगाउन सकिदैनयद्यपि यसको प्रभाव हुन सक्छ। यसलाई अँध्यारो पदार्थ भनिन्छ किनभने यसले प्रकाश उत्सर्जन गर्दैन। हाल, यो केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा हो कि आकाशगंगाको ब्यबहारको व्याख्या गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कहिलेकाँही आकाशगंगा अर्को ग्यालेक्सीमा जुम हुन्छ र ती अन्तमा टकराउँदछन्, तर तिनीहरू यति ठूला र फूलेका हुन्छन् कि तिनीहरूलाई बनाउने वस्तुहरूको बीचमा कुनै टक्कर हुँदैन। वा, यसको विपरित, विनाश हुन सक्छ। जे भए पनि, किनभने गुरुत्वाकर्षणले पदार्थलाई घनी बनाउँछ, फ्यूजनले सामान्यतया नयाँ ताराहरूको जन्म दिन्छ।
सौर प्रणालीको स्थापना हुनुभन्दा धेरै अघि ब्रह्माण्डमा आकाशगंगाहरू अस्तित्वमा थिए। यो बहु तत्वहरू बाट बनेको प्रणाली हो, जस्तो कि तारा, एस्टेरोइड, क्वासार, कालो प्वाल, ग्रहहरू, लौकिक धुलो, र आकाशगंगाहरू।
ग्यालक्सीहरूलाई वर्गीकृत गर्न धेरै तरिकाहरू छन्, तर सबै भन्दा साधारण तिनीहरूको आकार अनुसार छ।
अण्डाकार आकाशगंगा: ती हुन् जुन अण्डाकार छ जसको कारण उनीहरू एक अक्ष को साथ संकुचन को कारण छ। तिनीहरू प्राय: पुरानो ताराको बनेका छन् जुन प्राय: ग्यालक्सी क्लस्टरहरूमा पाइन्छ। ती मध्ये अहिलेसम्म चिनिने मध्ये, सबै भन्दा ठूला आकाशगंगाहरू अण्डाकार छन्। त्यहाँ सानो आकारको पनि छन्।
सर्पिल ग्यालक्सीहरू: ती हुन् जुन सर्पिल आकारको हुन्छन्। यसले डिस्कको एक प्रकार समावेश गर्दछ जुन सपाट गरिएको थियो र यसका वरिपरि हतियारहरू छन् जसले यसलाई यसको विशेषता आकार दिन्छ। मध्य भागमा ठूलो मात्रामा उर्जा केन्द्रित हुन्छ र तिनीहरू प्राय: भित्र ब्ल्याक होलको हुन्छन्। सबै सामग्रीहरू जस्तै ताराहरू, ग्रहहरू र धुलो केन्द्रको वरिपरि घुम्छन्। धेरै लामो हतियार भएका व्यक्तिले अधिक विस्तारित आकार लिन्छन् जुन सर्कल भन्दा बारबेलजस्तो देखिन्छ। यी आकाशगंगाहरूको बीचमा जहाँ ताराहरू जन्मेका रूपमा सोच्दछन्।
अनियमित आकाशगंगाहरू: तिनीहरूसँग स्पष्ट मोर्फोलोजी छैन, तर युवा ताराहरू छन् जुन अझै अवस्थित छैन।
लेन्टिकुलर ग्यालक्सीहरू: तिनीहरूसँग आकार छ जुन सर्पिल र अण्डाकार आकाशगंगाहरूको बीचमा छ। यो भन्न सकिन्छ कि तिनीहरू हतियारबिना डिस्कहरू छन् जसमा अन्तर-तारा सामग्रीको सानो मात्रा छ, यद्यपि केहिले निश्चित मात्रा प्रस्तुत गर्न सक्दछ।
फरक: नामले भनेको जस्तै, त्यहाँ केहि यस्ता छन् जुन अनौंठो र असामान्य आकारहरू हुन्। रचना र आकारका हिसाबले ती विरलै छन्।
उत्पत्ति र विकास
आकाशगंगाको उत्पत्ति अझै पनि अन्तहीन बहसको विषय हो। उही नामको सिद्धान्त अनुसार, खगोलविद्हरु विश्वास गर्छन् कि तिनीहरु को गठन भएको केही समय पछि नै शुरु भयो बिग बैंग विस्फोट यो ब्रह्माण्डको विस्फोट हो जसले ब्रह्माण्डको जन्मलाई जन्म दियो। विस्फोटन पश्चात चरणमा ग्यासका बादलहरु गुरुत्वाकर्षणको क्रिया अन्तर्गत कम्बल गरियो र आकाशगंगाको पहिलो भाग गठन गर्दछ।
ताराहरू ग्लोब्युलर क्लस्टरहरूमा जम्मा गर्न सक्छन् आकाशगंगा को लागी मार्ग बनाउन को लागी, वा शायद पहिलो आकाशगंगा को रूप र त्यसपछि समावेश ताराहरु संगै आउँछ। यी युवा आकाशगंगाहरू अहिलेको भन्दा सानो र एक अर्काको नजिक छन्, तर जब तिनीहरू एक अर्कासँग टकराउँदछन् र विस्तार भइरहेको ब्रह्माण्डको हिस्सा हुन्छन्, तिनीहरू बढ्दै जान्छन् र आकार परिवर्तन गर्दछन्।
अधिकांश आधुनिक टेलिस्कोपहरूले धेरै पुरानो आकाशगंगाहरू पत्ता लगाउन सक्षम भएका छन्, जुन बिग ब्यांगको केही समय पछि शुरू भयो। मिल्की वे ग्यास, धूलो र कम्तिमा १०० अरब ताराहरू मिलेर बनेको छ। यो जहाँ हाम्रो ग्रह अवस्थित छ र यो एक निषेधित घुमाउरो आकारको छ। यो ग्यास, धूलो, र कम्तिमा १०० अरब ताराहरू मिलेर बनेको छ। धुलो र ग्यासको बाक्लो क्लाउडको कारणले यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्न असम्भव भयो, यसको केन्द्र लगभग भिन्न छ। यद्यपि वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्दछन् कि यसले एक सुपरमासिव ब्ल्याक होल, वा यस्तै प्रकारले, ब्ल्याक होलमा हजारौं वा लाखौं सौर्य जनसंख्याको समूह रहेको छ।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले ग्यालेक्सी भनेको के हो र यसको विशेषताहरु के को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » एउटा ग्यालेक्सी भनेको के हो?